नेपाल लाइफको एफपीओ बिक्री खुल्यो, कहाँ–कहाँ छन् आवेदन भर्ने केन्द्र ?
काठमाडौं : नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले बुधबारदेखि ३० लाख ९६ हजार चार सय २० कित्ता एफपीओ बिक्री खुला गरेको छ । यो एफपीओको लागि सिद्धार्थ बैंकका प्रायः सबै शाखा कार्यलयबाट सेयर आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक सिद्धार्थ क्यापिटल, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कमलादी हेरिटेज प्लाजामा पनि आवेदन दिन सकिनेछ । तर यी शाखाबाट भने चेकमात्र बुझ्ने ब्ववस्था गरिएको छ । कम्पनीले कुल ८१ वटा केन्द्रबाट सेयर फारम लिन र बुझाउन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा नेपाल लाइफको एफपीओ भर्न तुलनात्मक रुपमा निकै सहज हुने देखिन्छ ।
यो एफपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ३० हजार नौ सय ६० कित्ता सम्म आवेदन दिन पाइनेछ । माघ २ गतेसम्म सेयर भर्न पाइनेछ । यो एफपीओमा बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले गर्दैछ । नेपाल लाइफको हाल चुक्ता पुँजी दुई अर्ब १६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ रहेको छ । एफपीओ बाँडफाँटपछि चुक्ता पुँजी दुई अर्ब ४७ करोड ७१ लाख ४२ हजार नौ सय रूपैयाँ पुग्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट जम्मा भएको रकममध्ये प्रतिकित्ता एक सय रूपैयाँका दरले आउने पैसा चुक्ता पुँजीमा जोडिनेछ भने प्रिमियमबाट संकलन भएको रकम रिजर्भ कोषमा जानेछ ।
एफपीओपछि कम्पनीको रिजर्भ कोषमा ६ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख रूपैयाँ जम्मा हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा कम्पनीको जीवन बिमा कोषको आकार ४२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको हुने विवरणमा देखाइएको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि ३६९ रुपैयाँ ८६ पैसा पुग्ने कम्पनीको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१–७२ को नाफाबाट २५ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनसमा लाग्ने कर तिर्न १।३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को नाफाबाट लाभांश दिन बाँकी छ । कम्पनीले ३० लाख ९६ हजार चार सय २० कित्ता एफपीओ प्रतिकित्ता १४ सय २५ रूपैयाँका दरले बिक्री गर्नेछ । नेपाल लाइफलाई एक सय रूपैयाँ अंकित मूल्यमा १३ सय २५ रूपैयाँ प्रिमियम मूल्य जोडेर प्रतिकित्ता १४ सय २५ रूपैयाँका दरले एफपीओ ल्याउन धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको हो ।
यो इन्सुरेन्सले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल ३० लाख ९६ हजार चार सय २९ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्न लागेको हो । लामो समयदेखि नेपाल लाइफको एफपीओ पाइपलाइनमा थियो । यसअघि कम्पनीले एक सय रूपैयाँ अंकित मूल्यसहित २९ सय ५१ रूपैयाँमा एफपीओ ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीको प्रस्ताव गरेको त्यो भाउ धितोपत्र बोर्डले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि बोर्डले एफपीओ निष्कासनसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गर्यो । त्यसै विधिका आधारमा अहिले नेपाल लाइफले एफपीओ ल्याउन अनुमति पाएको हो ।
यस्ता छन् आवेदन दिने ठाउँ
सिन्धुपाल्चोकको याम्बालिङ् खोलामा ७.२७ मेघावाट बिजुली निकालिने, चिनियाँ लगानी
निकै धनी रहेछन् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अमेरिकी डलर समेत गरी करोडौं रुपैयाँ बैंकमा
हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कति छ सम्पति ? सेयरमा देखिएन है लगानी
पञ्चकन्या माईको ११ लाख कित्ता आइपीओ आउँदै, धितोपत्र बोर्डसँग माग्यो अनुमति
राधीको खुद नाफा ४ करोड ३४ लाख, प्रतिसेयर आम्दानी आयो यस्तो
रैराङ हाइड्रोपावरको आइपीओ तपाईंलाई पर्यो त ? रिजल्ट अब नेपाली पैसामा यसरी हेर्नुहोस